Wadaniyada iyo Ahmiyada ay Leedahay - Diblomaasi
Mawliid Axmed Xassan
Related Topics:Wadaniyada iyo Ahmiyada ay Leedahay
Waa qoraa ka tirsan bahda qorayaasha ee Somalism.so Waa saynis-yahaan bartay culuumta sayniska iyo caafimaadka guud, waa qoraa iyo cilmi baadhe lafagura arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqanka, wacyigalinta iyo dhiirigelinta bulshada. Qoraagu wuxuu wax ku bartay wadanka Suudaan halkaas oo uu ku qaatay shahaadada heerka koowaad iyo labaad ee jamacada, oo kala ah kuliyadaha sayniska qaybta noolayaasha il ma aragtiga ah, heerka labaadna ku qaatay caafimaadka guud.
Baahi intee la’eg ayaa loo qabaa Xarumaha Fikirka ee Soomaaliyeed?
La’aanta cilmibaarista, xarumaha daraasadaha, daciifnimada kaalintooda, waa fursad luntay oo ay tahay inaan fiiro gaar ah u yeelano oo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah dib loo dhiso, maxaa yeelay dhibaatooyinkeenna waxaa lagu xallin doonaa oo keliya iyada oo loo marayo maskaxdeena aan dheregsaneyn ee si hagar la’aan ah u raadino xalka.
Bidax: Iskuulka Athens, Raphael Sanzio (1483-1520) - Midig: Maktabaddii Guriga Xikmada ee Baqdaad, Javier Romano
Way fiicnaan lahayd haddii aan dhisno hay’ado cilmi baaris ah oo ka shaqeeya dal kasta iyo heerka gobolka guud ahaan waqtiyadadaan muhiimka u ah taariikhda dalalkeenna, gaar ahaan kuwa ku howlan dhisidda nabadda oo markaa u baahan in la shaqaaleeyo.
Cilmi-baaristu waa qaabka lagu gaaro aqoon cusub, amaba waxaa la yiraahdaa waa: waa baaritaan nidaamsan (aruurin iyo dhiraandhirin xog) taasoo loo qaabeeyo inay horumariso ama ka qayb qaadato aqoonta. Haddaba, isku soo duuboo cilmi-baaristu waa soo saaridda iyo ka gun-gaarida aqoonta iyo cilmiga dahsoon si bulshadu ay u gaarto horumarka ay ku taamayso dhinac walbaba. Cilmi-baaristu way ka duwan tahay qaababka aqoonta lagu gaaro sida akhriska buugaagta iwm, sababtoo ah waxay leedahay qaab cilmi ah oo la raaco.
Xarumaha cilmi-baarista ee waddammada xorta ah ee horumaray waxay inta badan abuureen shabakado siyaasadeed oo xudduud ka gudbaya oo ay ku jiraan xisbiyo siyaasadeed, kooxo daneynaya, shirkado, ururro caalami ah, iyo ururrada bulshada rayidka ah, marka lagu daro jaamacadaha iyo hay’adaha rasmiga ah.
Dhammaan dowladaha Carabta oo ay Soomaali koow ka tahay, waxaa loo baahan yahay khibrad iyo karti si looga gudbo dhibaatooyinka loona xaliyo caqabadaha si loo gaaro himilada la doonayo ee nabadda, xasilloonida iyo horumarka.
Dadyowga Soomaaliyeed waxaa dhibaatooyin badan ka haysto dhinaca isbeddelka waxbarashada dalka. Aqoonyahaanada Soomaaliyeed intooda badan waxa ay maanta aaminsan yihiin in cilmiga uu ku jiro in marka hore la barto luuqadaha shisheeye. Waxaa jiray dad ku dooday in iskuulada laga dhigo luuqadda Ingiriiska, kuwa ayaa doonaya in la isku daro Ingiriis iyo Carabi labadaba, iyadoo qaar kalana ay ku doodeen in luuqadda isticmaalayo waxbarashada dalka ay noqoto Af soomaali.
Waxaana xaqiiqo ah in ummad walbo ummadaha kale waxay kaga horeeyaan inta ay luuqadahooda wax ku bartaan. Ma jiro hal iskuul oo ardada wax ku barata luqadda Soomaaliga iyada oo luuqadda la isticmaalo ay tahay Carabiga iyo Ingiriiska. Iskuul waxaa jira heerka dugsiga hoose u isticmaalay luuqadda Soomaaliga balse dib ugu wareegay Ingiriiska marka la gaaray heerka dugsiga sare.
Waa inaan isweydiinaa heerka sharafta iyo qadarinta cilmiga. Marka hore macallimiinta, waalidka iyo dadka waxbarashada ka shaqeeyaba waxa ay isku waafaqeen in bulshada Somaaliyeed aysan tixgalin iyo qadarin u haynin macallimiinta iyo waliba xirfadda macallinnimada. Wasaaradda waxbarashadu waxa ay muujisay walaac ku aaddan in dadka ugu fahmada iyo tayada badan bulshada dhexdeeda aysan macalinimadda kamid ahayn.
Guriga Wisdom ama Bayt al-Hikma oo ku yaalay Baqdaad qarniyadii dhexe, waxay isu keeneen rag saynisyahan ah, iyo guud ahaan cilmiga kala duwan, iyadoo ujeedadu tahay in la horumariyo aqoon isweydaarsi kala duwan oo bulshada dhexdeeda ah.
Saynisyahanno, falsafadleyda, afafka, xisaabiyeyaasha, geometerka, cirbixiyeennada, fannaaniin iyo wixii la mid ah, waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen xaalado iswaafajinaya oo isku xiraya cilmiyadooda kala duwan, iyadoo ujeedadu tahay in la helo miiqyada guud ee ka wada muuqda dhammaantood, maadaama dhammaan af-hayeennada giraangiradu kulmayaan bartamaha. Tani waxay ahayd tusaale iskaashi dhab ah.
Mongolisku waxay burburiyeen Maktabaddii Guriga Wisdom ee Baqdaad oo waxay ku tuureen Muga ee Webiga Tigris, iyagoo ku madoobaaday biyaheeda madow. Maktabadda Alexandria waa la gubay waxaana la waayey qayb weyn oo ka mid ah keydkii ilbaxnimadii Fircooniga iyo Giriigga.
Waxa aan xaq u leenahay in aan maanta u baroorano tacadiga hantidan cilmiga ah oo ka baxay dadka muslimiinta.
Laakiin nasiibdarada ina qabsatay ayaa ah in aynan isku dayeynin in aan dib usoo saarno aqoontaan, isla markaana aan luminay fursad kasta oo ina hor taal si aan u dhisno ilbaxnimo cusub maanta! Haddii aan loo istaagin in aqoontaasi dib loo soo saaro waxaanu ku dhex milmaynaa ilbaxnimada casriga ee dadyowga kale.
Haddii aynu jaleecno xaaladdaha aqooneed ee dunida, waxaan ka helaynaa diirad weyn, gaar ahaan waddamada horumaray, waxa loogu yeero xarumarka fikirka (ama xarumaha daraasadaha iyo cilmi baarista), kuwaasoo ka ciyaaray door muhiim ah, kana qaatay horumarka wadamadan heerarka sayniska iyo garashada guud ahaan.
Si kastaba ha noqotee, ka waran xaqiiqda xarumaha fikirka carabta, gaar ahaan kuwa khuseeya siyaasadda iyo guud ahaan aadanaha?
Ereyga “fikirka” wali dad badan ayuu mugdi ugu jiraa, tanina waa mid la fahmi karo iyadoo ay ku xiran tahay doorarka adag ee hay’adahaan, iyo ujeedooyinkooda oo aan qalalaase la’aan lahayn. Markaa waa aalad siyaasad dejineed in lagu fuliyo qaab ama qaab kale. In kasta oo ay ku fideen xarumahan nidaamyo badan oo siyaasadeed adduunka oo dhan, joogitaankooda xagga daabacaadda iyo warbaahinta elektaroonigga ah, iyo tabarucaaddooda ku aaddan shaqada dawladaha, baarlamaannada iyo la-tashiyada dadweynaha, weli way adag tahay in si sax ah loo qeexo ama lagu qeexo.
Warbixinta xarumaha fikirka iyo bulshada rayidka ah ee ay soo saartay “Machadka Lauder” ee jaamacada Pennsylvania sanadka 2021 ayaa sheegaysa in sanadkii la soo dhaafey tirada ururada fikirka ee adduunka ay gaareen 11,175 xarumood, waa saamiga wadamada Carabta – guud ahaan – wuxuu ahaa qiyaastii 390 xarumood (badankood waa mugdi, ama fikir ahaan) Ama saameyn daciif ah), halka Mareykanka kaliya uu leeyahay ilaa 2200 xarumood!
Bare-yahanka cilmiga siyaasada ee Mareykanka borofisar John Kingdon wuxuu ugu yeeraa kuwa ka shaqeeya xarumaha fikirka “ganacsadayaal siyaasadeed”, maadaama ay door muhiim ah ka ciyaarayaan marxaladaha kala duwan ee geedi socodka “siyaasad dejinta”. Waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan xilliyada dhibaato abuurista, markay raadinayaan xalalka, ama markaad u fidiso xalalkan kuwa go’aanka gaara, ama xitaa markaad u doodayso siyaasado gaar ah adigoo gaarsiinaayo dhagaystayaasha ballaadhan.
Diirad saarida xarumaha cilmi baarista ee dalkeena Soomaaliyeed waxay noqotay baahi deg deg ah ee loo baahan yahay wakhtigaan. Wey jiraan kuwa wax soo saarkooda aad u liita, waxaana loo sababayn karaa dhaqaalle-xumo iyo taageero la’aan. Si loo soo jiito waaya-aragnimada khabiirada Soomaaliyeed, hibada iyo awoodaha dhalinyarada Soomaalida, ee xiisaynaya shaqadaan waa in la soo dhaweeyo oo la maalgeliyo.
Sababtoo ah la’aanta cilmibaarista, xarumaha daraasadaha, daciifnimada kaalintooda, waa fursad luntay oo ay tahay inaan fiiro gaar ah u yeelano oo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, maxaa yeelay dhibaatooyinkeenna waxaa lagu xallin doonaa oo keliya iyada oo loo marayo maskaxdeena aan dheregsaneyn ee si hagar la’aan ah u raadino xalka.
Mala mudaharaadi karaa iyadoo loo eegaayo Qaanuunka Dowliga iyo Sharaaceda Islaamka?
Waxaa muhiim ah inaan ogaano in meelo badan oo dunidu ka dhaceen mudaharaadyo qaar waa lagu najaxay, qaarna waxaa laga dhaxlay dhibaato aan laga soo waaqsan.
Mudaharaadku wuxuu noqon karaa muujinta xuquuqda xorriyadda isu imaatinka, xuquuqda xorriyadda ururrada, iyo xaqa xorriyadda hadalka. Intaa waxaa sii dheer, mudaaharaadyada iyo xaddidaadda mudaaharaadku waxay socdeen illaa intii ay dowladuhu lahaayeen.
Heshiisyo badan oo caalami ah ayaa ka kooban qeexitaan cad oo xuquuqda banaan-baxyada ah. Heshiisyada noocan oo kale ah waxaa ka mid ah heshiiskii Yurub ee 1950 ee Xuquuqda Aadanaha, gaar ahaan Qodobbada 9aad ilaa 11aad; iyo Axdigii Caalamiga ahaa ee Xuquuqda Madaniga iyo Siyaasadda ee 1966, gaar ahaan qodobbada 18aad ilaa 22aad.
Qodobbada 9aad waxay muujinayaan “xuquuqda xorriyadda fikirka, damiirka, iyo diinta.” Qodobka 11aad wuxuu qeexayaa “xuquuqda xorriyadda la-dhaqanka dadka kale, oo ay ku jirto xuquuqda sameynta iyo ka mid noqoshada ururrada shaqaalaha si loo ilaaliyo danahiisa.
Si kastaba ha noqotee, heshiisyadan aanu soo sheegnay iyo kuwa kaleba xuquuqda xorriyadda isu imaatinka, xorriyadda ururrada, iyo xorriyadda hadalka ayaa ku xiran nidaamyo xaddidaayo oo gaar ah. Tusaale ahaan: Axdiga Caalamiga ah ee Xuquuqda Madaniga iyo Siyaasadda waxaa ku jira qodobo mamnuucaya wax badan oo ku saabsan sida in la fidiyo “dacaayad dagaal” iyo u doodista “nacayb Qaran, Midab ama diin”.
Waxa la ogolyahay xaddidaadda xorriyadda isu imaatinka haddii loo baahdo “bulsho dimoqraadi ah iyadoo la ilaalinaayo danaha amniga qaranka ama nabadgelyada guud, kala dambaynta bulshada, ilaalinta caafimaadka bulshada ama anshaxa ama ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadaha dadka kale. “
Waxaa muhiim ah inaan ogaano in meelo badan oo dunidu ka dhaceen mudaharaadyo qaar waa lagu najaxay, qaarna waxaa laga dhaxlay dhibaato aan laga soo waaqsan. Dunidana dalalka ku yaala waxay leeyihiin isu soo baxyada shuruuc kala duwan.
Mudaaharaadku, si kastaba ha noqotee, qasab maahan inuu rabshad ama khatar ku yahay danaha amniga qaranka ama amniga guud. Sidoo kale qasab ma’ahan caasinimo shacab, ama gadood shacab in la diido marka mudaharaadku uusan ku lug lahayn ku xadgudubka shuruucda gobolka ama dalka. Dibadbaxyada, xittaa ololaha iska caabinta aan xasilooneyn, ama iska caabinta shacabka, inta badan waxay yeellan karaan dabeecada (marka lagu daro isticmaalka habab aan xasilooneyn) oo si togan loogu taageerayo dimuqraadiyada.
Tani waxay dhici kartaa, tusaale ahaan, marka iska caabinta noocan oo kale ahi ay timaaddo iyada oo laga jawaabayo afgembi militari; ama arrin la mid ah diidmada hoggaanka dalka ama gobolka ee ah in uu iska dhiibo xafiiska uu hayo ka dib guuldaradii doorashada kaga timi ama uu isagu ku qasbo fikirka kooxdiisa ama xisbigiisa iyo dal uu ka jiri karo xisbiyo badan ama musharaxiin badan.
Bannaanbaxa iyadoo laga eegaayo shareecada Islaamka
Islaamku wuxuu dammaanad qaaday xorriyadda fikirka iyo ra’yi dhiibashada, waxay la micno tahay: insaanka ayaa ku raaxaysanaya xorriyadda buuxda ee ah inuu ka hadlo runta kana talo bixiyo dhammaan arrimaha diinta iyo adduunkaba, isagoo kasbanaya waxtarka.
Muslimiinta iyo illaalinta danaha qofka iyo bulshada iyo dhowrista kala dambaynta bulshada dhexdeeda iyadoo la raacayo dardaaranka wanaag farida iyo reebida Xumaanta. In kasta oo Islaamku ka walaacsan yahay xorriyadda fikirka iyo ra’yi dhiibashada kali ah oo awood badan siinaayo in la raaco shareecada waxay fareyso haddana wuxuu iskasii taxaddaray in aan laga xoreynin xannibaadaha iyo kontaroolada hubinaya addeegsigiisa fikir iyo waxa bini’aadanka u wanaagsan ee ilaahay u jideeyay.
Waxaa jira xuduudo aan loo baahnayn in la gudbo marka la banaan baxaayo, oo ay ka dhalan karto natiijada ah in la galo waxa Illaah ka cadhaysiinaya ama waxyeello u geysanaya qofka iyo bulshada labadaba, oo khalkhal gelinaya nidaamka bulshada iyo akhlaaqda wanaagsan.
Waa in la damaanad qaadaa habab iyo qaababka lagu gaari karo, mudaharaad nabadeed taasna waa mid yar oo dadka mudaharaadka galaya waxaa ku soo dhex dhuuman kara burcad ama dad fowdo iyo qas abuur ah. Shareecada islaamka waxay ka tiri Mudaharaadka sidan:
Dhacdo kasta waxay u baahan tahay inla ogaado mabaadi’da iyo qawaaniinta ka soo ifbaxaya aqoonteeda iyo warbixinteeda, lagana baato shareecada islaamka bayaanka xukunka Shareecada ee loogu talagalay iyada iyo mabaadi’da ugu muhiimsan ee loo gudbiyo si loo oggaado xukunka dhabta ah ee arrintaas bannaanbaxa ah, bannaaniibtiisa ama dhib iyo dheef kee buu noo leeyahay.
Waxaana marka hore nala faray wax badan oo ka horeeya bannan bax in la qabto.
1. Xukunka u hoggaansanaanta taliyaha ama Madaxda ama madaxweynaha.
Mid ka mid ah xadiisyada asalka Sunnada, Nabigaeena ayaa ah inay aaminsan yihiin inay lagama maarmaan tahay in la dhageysto loona hoggaansamo taliyada dalka amarka ee ka soo baxana Muslimiinta waa inay qaataan fuliyaan bilaa caasinimo.
ILAAHAY – Weynaaye- wuxuu yiri: (Kuwa xaqa rumeeyow, adeeca Eebe oo adeeca Rasuulka iyo kuwiinna amarkiina talada gacanta ku haya oo ah madaxdiina. (An-Nisaa ‘: 59)
Saldanadana arrimaheena haddaan muslimiin nahay waxaa gacanta ku haya,
1. Madaxweynaha la doortay iyo
2. Culimada Illaahay dartii dadka wax ugu sheega oo u bara waana labada qeeb ee aayadan na fartay in la adeeco lana raaco warkood.
Ibnu Cumar – Allaha ka raalli noqdee – inuu nebigu – naxariis iyo nabadgalyo Eebbe korkiisa ahaataye – yidhi: (Qofka muslimka ahi waa inuu dhagaystaa oo u hoggaansamaa Amiirka wuxuu jecel yahay hala amree ama wuxuu neceb yahay, haddii aan lagu amrin inuu Eebe wehne caasiyo mooyee) haddii lagu amro inuu illaahay caasiyo lama adeecaayo lama maqlaayo qofkuu doono ha ahaadee).
2. Hoggaamiyaha xaqdarada wada laguma addeecaayo xumaanta tusaale Nabi Maxamed NNKH ayaa diray ciidan wuxuu madax ugu dhigay nin ansaari ahaa ninkii ansaariga ahaa ayaa saxaabadii la socotay ku amaray inay qoryo soo guraan oo dabshidaan kadib ku yiri kooxdiisii “dabkaan gala waayo waxaa la idin faray inaad i adeecdaane.” Saxaabadii taa ka diiday oo ku yiri “naar ayaan ka soo cararnay oo Nabi Maxamed NNKH ayaan raacnay adigana ma haddaad naar nagu gubeysaan dunida korkeeda.” Arrintii ayaa Nabiga scw loo sheegay wuxuu yiri “dabkaas haddii ay geli lahaayeen waligood kama baxeen, wanaaga ayaa la isku addeecaa ee xumaanta maya.”
3. Hoggaamiyaha ama madaxweynaha waa loo naseexeynayaa wanaaga ayaa loo sheegayaa xumaantana waa laga diidayaa.
Taariq bin Shihab wuxuu yidhi: Qofka ugu horeeya ee bilaabay khudbada maalinta ciida salaada kahor, wuxuu ahaa Marwaan, markaasuu nin istaagay oo ku yidhi: Salaada ayaa ka horeysa khudbada ciidda, wuxuuna yidhi: warkaas waa laga tagay. Abu Saciid al-Khudri, Allaha ka raalli noqdee, wuxuu yiri: ninka sisaa yiri, wuxuu ku sifoobay kuwa go’aanka laga qaadaanyo waxaan rasuulka ka maqlay isagoo leh: – Ruuxii idinka mid ah oo arka xumaan la falaayo, gacantiisa ha ku badalo, haddii uusan awoodin, markaa carrabkiisa, hadduusan awoodin, markaas qalbigiisa, tanina waa iimaanka ugu daciifsan)
4. Mudaharaadka waa inuu waafaqa shareecada oo ay san ka dhalan dhibka laga cabanaayo mid ka weyn.
5. Culimo badan oo casrigaan jooga iyo kuwo hore waxay yitaahdeen: mudaharaadka waa xaaraan waayo waxaa ka dhalaneysa dhibaato ka badan tan la doonaayo waxay yiraahdeen
Muduharaadka wuxuu leeyahay danbiyo waa weyn sida:
In rag iyo dumar is dhex galaan
In lagu dhawaaqo hadallo caro xambaarsan
In waqti ku lumo halkaas
In la dumiyo ama la fahsahaadiyo dhulka
In fowdo ay dhacdo
In la naf la gooyo
In nabada iyo ammaanka uu meesha ka baxo taasna waxaa tusaale cad ah eeg waxa ka jira ama ka dhacay kadib mudaharaadkii gu’gii carabta Yemen, Liibiya, Suudaan, Tunisia iyo dalal kale oo caalamka ku yaala. Iyo 1991 wixii dalka Soomaaliya ka dhacay oo shacab iyo jabhado ku kaceen nabadii kacaanka lagu haystay.
Waa maxay dowlad? – nidaam dowlaadeed
Waa maxay Dastuur?
Sawirka waxaa la qaaday wakhtigii la soo bandhigay dastuurka cusub ee Soomaaliya
Dastuurka wuxuu qeexaa xiriirka ka dhexeeya dawladda iyo bulshada, wuxuu u dhexeeya dadka wax xukuma iyo muwaadiniinta la xukumo. Waxay sidoo kale qeexaysaa sida dowladdu u shaqeyso, hay’adaha ay ka kooban yihiin iyo sida ay iskula xiriiraan. Dastuurka ayaa sidoo kale go’aaminaya awoodaha hay’adahaasi leeyihiin iyo kuwa aan lahayn.
Dastuurrada waxay u kala baxaan laba qaybood midkood: dastuurro dabacsan, sida kuwa Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, oo si fudud wax looga beddeli karo, iyo dastuurro go’an, aan rogrogmi karin, sida kuwa Mareykanka, oo ay adag tahay in la beddelo, iyadoo lagu beddelayo aqlabiyad keliya.
Soomaaliya waxaa hadda lagu xukumaa dastuur kumeelgaar ah. Dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa sharciga ugu sarreeya Soomaaliya. Waa aasaaska sharciga ee jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka iyo isha awoodda sharciga. Waxay dejisaa xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniinteeda, waxayna qeexaysaa qaab dhismeedka dowladnimo. Dastuurka Ku-meelgaarka ah waxaa la ansaxiyay Ogoosto 1, 2012 Golaha Dastuuriga ah ee Qaranka oo ku shiray Muqdisho, Banaadir.
Sida ku cad Dastuurka Soomaaliya, wuxuu dhiirri-gelinayaa xuquuqda Aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah, caddaaladda, xukuumad loo dhan yahay oo ku dhisan wadatashi, kala-soocidda awoodaha sharci-dejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan, iyagoo leh hannaan ku dhisan isla-xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha.
Qodobka 1aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
(2) Allahu Subxaanahu wa Tacaalaa ka sokow (SWT), awoodda oo dhan waxa leh Shacabka, wuxuuna ugu isticmaalayaa si toos ah iyo isagoo u adeegsanaya hay’adihiisa uu u xilsaartay, si waafaqsan Dastuurka iyo shuruucda. Waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobannimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ama u adeegsadaan si u gaar ah.
(3) Gobannimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa laguma-xadgudbaan.
Nidaam siyaasadeedka ayaa abuuraa dastuurka wuxuuna isku xiraa fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka iyadoo loo maraayo qaab dowladeed oo lagu go’aaminayo xiriirada kala duwan ee ay wadaagaan midba midka kale.
Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanku waxay leeyihiin qaabab siyaasadeed oo aad u kala duwan hadana waxay leeyihiin wax ay ka wada siman yihiin oo ah dimuqraadiyadda. Xagga qaab maamulka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa caddeynaayo dastuurka dalalkooda.
Isbarbardhiga nidaamyada siyaasadeed ee Ingiriiska iyo Mareykanka, asal ahaan, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya ayaa ah in Boqortooyada Midowday ay leedahay nidaam baarlamaani ah iyo dowlad midaysan; Mareykanka nidaam madaxweyne iyo dowlad federaal ah. Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanku waxay leeyihiin qaabab siyaasadeed oo aad u kala duwan. Sida laga soo xigtay Arend Lijphart, mid kastaa wuxuu tusaale u yahay laba nooc oo kala duwan oo dimoqraadiyadda xorta ah.
Qaab-dhismeedka hay’adeed ee kala duwan, gaar ahaana nidaam siyaasadeed kasta oo qaab qaran loo sameeyay, waxay saameyn ku leeyihiin ku dhaqanka siyaasadda. Qaab-dhismeedyada noocaan ah waxaa ka mid ah qaab dowladeedka, dastuurka, xiriirka fulinta iyo sharci dejinta, kormeerka garsoorka ee siyaasadda, doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada. Dhammaan qaab-dhismeedyadani waxay gacan ka geystaan go’aaminta sida hay’adaha muhiimka ah, gaar ahaan fulinta, sharci-dejinta iyo garsoorka, ay ula falgalaan midba midka kale una soo saaro wax soo saar siyaasadeed oo gaar ah.
Aragtida Dawladnimadu waxay ku xeran tahay sida ay dadka u sharaxdaan ama ay u fasirtaan dowladnimada. Way fiicnaan kartaa ama xumaan kartaa iyadoo ay ku xiran tahay aragtida dadka.
Dowlad waa nidaamka siyaasadeed ee ka jira dal, waa nidaamka lagu maamulo bulsho. Ereyga dowlad wuxuu ka soo jeedaa ereyga Giriigga ah [kubernáo] oo macnaheedu yahay in lagu hoggaamiyo.
Nidaamka dowladnimo waxay la xiriirtaa “geeddi-socodka is-dhexgalka iyo go’aan qaadashada ee ka dhex jira bulsho caafimaad qabta, wadajirka horseedda hal-abuurnimada, xoojinta xirriirka bulsho, horumarinta hay’adaha waxbarashada iyo caafimaadka”.
Dowladnimada waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay geedi socodka siyaasadeed ee ka dhex jira ama u dhexeeya hay’adaha rasmiga ah.
Plato wuxuu dhiirrigeliyey dowlad ku dhisan wanaag iyo caddaalad, middaas oo horseedi karta danta guud ee qof kasta oo ka tirsan siyaasadda, oo ay ku jiraan kuwa sharafta leh, kuwa hodanka ah iyo kuwa saboolka ah. Ujeeddadan ayaa ah tan ugu caansan ee loo aqoonsi-ogyahay marka laga hadlaayo dowlad.
Dowladnimadu waxay ka kooban tahay dhammaan howlaha maamulka – ha ahaato mid ay qabato dowlad gobol, suuq, ama shabakad – oo ku saabsan nidaamka bulshada iyadoo loo marayo sharciyada, qawaaniinta, awoodda ama luuqadda bulsho abaabulan.
Fikradda “dowladnimo” maahan mid cusub. Si kastaba ha noqotee, macnaha dhabta ah ee fikrada dowladnimo waxay ku xirantahay heerka dowladnimo ee aan kahadleyno, ujeedooyinka laga leeyahay in la gaaro iyo habka loo raacayo.
Ereyga dowladnimo waxaa loola jeedaa waxqabadka dowlada. Marka la eego shuruucda, waa xeerarka iyo sharciyada ay dowladu sameyso ee la raba in lagu hirgeliyo xafiis dowladeed oo la xushay oo loo yaqaano maamul. Nidaamka lagu xukumo dadka ama dowlad waxaa lagu magacaabaa dowladnimo
Dowladnimadu waa isdhexgalka hay’adaha rasmiga ah iyo kuwa bulshada rayidka ah. Dowladnimadu waxaa loola jeedaa geedi socod ay xubno bulshada ka mid ahi ay adeegsadaan awood ayna dejiyaan siyaasado iyo go’aanno khuseeya nolosha bulshada iyo kor u qaadista bulshada.
Aragtida Dowladnimadu waxay ku xeran tahay sida ay dadka u sharaxdaan ama ay u fasirtaan dowladnimada. Way fiicnaan kartaa ama xumaan kartaa iyadoo ay ku xiran tahay aragtida dadka.
Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanku waxay leeyihiin dowlado iyo qaab siyaasadeed oo aad u kala duwan hadana waxay leeyihiin wax ay ka wada siman yihiin oo ah dimuqraadiyadda. Xagga qaab maamulka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa caddeynaayo dastuurka dalalkooda.
Gabagabadii, waxaa iska cad in fikirka dowladnimo sanadihii la soo dhaafay uu ku soo kordhay macnayaal balaaran. Marka laga reebo inuu yahay aalada maaraynta arrimaha bulshada, ama cabir horumar siyaasadeed, dowladnimadu waxay noqotay farsamo waxtar leh oo lagu xoojinayo sharcinimada bulshada. Waxay sidoo kale noqotay qaab gorfeyn ama qaab siyaasadeed isbarbardhig ah.
Waa Maxay Aragtida Liberalism-ka?
Liberalism waa falsafad siyaasadeed oo ku saleysan xorriyadda, xagga maamulka iyo sinnaanta. Aragtida liberalka waxay soo bandhigtaa aragtiyo kala duwan oo ku saleysan mabaadi’da ay aaminsan yihiin sida, suuqyada xorta ah, ganacsiga xorta ah, awwooda dowladda oo la xaddido, xuquuqda shaqsiyadeed, hantiwadaaga, dimuqraadiyadda, cilmaaniyadda, sinnaanta jinsiga, xorriyadda hadalka, xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda diinta.
Aragtidaan waa midabka siyaasadeed ee inta badan lala xiriiriyo xorriyadda.
Haddii aan isku dayo af soomaali ahaan wuxuu erayga liberalism’ noqonayaa xorriyadda’. Aragtidaan siyaasadeed waxay soo baxday qarnigii 18aad iyo 19aad.
Hoggaamiyeyaashii kacaankii Ingiriiska ee 1688, kacaankii Mareykanka ee 1776 iyo kacaankii Faransiiska ee 1789 waxay adeegsadeen falsafad furfuran si ay ugu hirgasho afgembiga hubeysan ee xukunka boqortooyada. Iintaas kadib, Aragtida Xorriyadda ‘liberalism-ka’ ayaa bilaabatay in si dhaqso leh ku faafo gaar ahaan kacaankii Faransiiska kadib.
Qarnigii 19aad waxaa la arkay dawlado xor ah oo ka hirgalay wadammada Yurub iyo Koonfurta Ameerika. Dhinaca Ingiriiska, waxaa loo adeegsaday aragtidaan in lagu naqdiyo aasaaska siyaasadeed.
Intii lagu gudajiray qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad, xorriyad furnaantii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Bariga Dhexe waxay saameyn ku yeelatay xilliyadii dib-u-habeynta sida Tanzimat iyo Al-Nahda iyo sidoo kale kor u qaadista dastuurka, qaranimada iyo cilmaaniyadda.
Kahor 1920, aragtida xorriyadda’ waxaa si weyn uga soo horjeeday shuuciyada, muxaafidka iyo hantiwadaaga, sidaas awgeed, liberalism-ku wuxuu markaa wajahay caqabado waawayn oo xagga fikirka ah oo ka yimid faashiismka iyo Markis-Leninism oo ah mucaarad cusub. Intii lagu gudajiray qarnigii 20aad, fikradaha xorta ah wey sii fidayeen, gaar ahaan Galbeedka Yurub.
Liberalism-ka waa mid ka mid ah dhaqanka siyaasadeedka ugu waaweyn dunida Galbeedka iyo fikradaha siyaasadeed ee ka jira Mareykanka. Liberalism-ka caadi ahaan wuxuu xoojinayaa xoriyadda bulshada, waxayna diiradda saareysaa sinnaanta.
Aragtidaan guud ahaan, waxay taageertaa fikradaha iyo barnaamijyada xorriyadda hadalka, xorriyadda saxaafadda, xorriyadda diinta, suuqyada xorta ah, xuquuqda madaniga, dimuqraadiyadda, dowladaha cilmaaniga ah, iyo iskaashiga caalamiga ah.
Waan ogahay erayga xorriyad marka aad maqasho waxaad filanaysaa wax badan oo wanaag ah balse sheekada sida aad mooday ma ahan. Haddii lagu yiri ‘liberalism-ka wuxuu qabaa in shaqsiyaadka oo dhami si isku mid ah ha loolla dhaqmo xagga sharciga iyadoo aan loo eegaynin heerka jinsiga’
Jinsiga marka lagu leeyahay ha u qaadanin rag iyo dumar-ka aad taqaanay ee waa sheeko kala oo ka duwan. Jinsiga waxaa soo galaayo qaniis, qaniisad iyo dadka jinsigooda beddelay sida nin dumar iska dhigay iyo qof dumar ah oo rag isu bedeshay (hantida raga ayay sameysatay).
Dadka jinsigooda beddela waxay maraan qalliin oo mararka qaar halis keena kara, waxayna qaataan daawooyin hoormoonka ah si ay u helaan muuqaalka jinsiga ay isu egaysiiyeen.
Dhinaca wanaagsan markaa aad ka fiiriso, liberalism-ku waa dhaqan fikradeed siyaasadeed oo si’aad ah loogu faa’iday marka loo fiiriyo xagga horumarka, gaar ahaan aaminsanaanta dhaqanka xorta ah sida in bulshada isbeddel horumarineed ay la imaan karaan oo caqligooda ay ka shaqeysiin karaan sida hal-abuurnimadoodu, ikhtiraaciddooda hal-abuurnimaduna waxay keentay in bulshada ay noqdaan kuwa hanta aayahooda.
Waxwalbo waxay leeyihiin dhinac wanaagsan iyo dhinac xun, marka laga fiiriyo dhinaca wanaagsan aragtidaan siyaasadeed waa aragti isbeddel leh, faa’idooyinka ay leedahayna waa lagu faa’iday waxaana dareemay qofwalbo. Tani waxay ka turjumaysaa aragti rajo leh oo ku saabsan dabeecadda aadanaha, taas oo qabta in shaqsiyaadka sida ugu fiican loogu daayo wax soo saarkooda iyo hab-fikirkooda.
Aragtidan waxay si gaar ah ula xariirtaa dhaqaaleyahankii siyaasadeed ee Aadam Smith, gaar ahaan buuggiisii ‘The Wealth of Nations (1776)
Adam Smith waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qoraagii ugu horreeyay ee “sharraxay”, “The Wealth of Nations” (1776), shaqaynta hanti-wadaagga. Ogow inuu adeegsaday ereyga “nidaamka xorriyadda dabiiciga ah” – ereyga hanti-wadaagga lama isticmaalin ilaa waqtigii Marx. Halkan Adam Smith wuxuu ku doodayaa ficillada shaqsiyeed (wax iibsiga iyo iibinta), iyadoo ay dhiirrigelisay dano gaar ahaaneed, hadana wuxuu kor u qaaday danta guud, iyadoo loo marayo “gacanta qarsoon” ee suuqa; taasi waa, qiyaas ahaan, ku shaqeynta sharciyada khidmadaha iyo baahida.
Adam Smith wuxuu ku guulaystay nidaamkii ugu horreeyay ee dhaqaalaha siyaasadeed. Adam Smith, waa aabihii labaad ee aragtida liberalism-ka, aragtidaan wuxuu ku xoojiyay falsafada ‘laissez-faire, “The Wealth of Nations.” Waxaa kaloo jirta falsafad kale uu ku tilmaamay “gacanta aan la arki karin” (invisible hand) oo hagaysa jidka suuqyada xorta ah.
Marka aad fiiriso dhinaca diinta Islaamka, aragtida liberalism-ka kama soo horjeedo. Islaamka ma ahan diin horumarka diidan. Xaqiiqdii, Eebbe wuxuu la hadlay kuwa aan caqliga adeegsan:
“Runtii, noolaha ugu xun ee Eebbe agtiisa waa kuwa dhago la ‘oo carrab la’ oo aan caqli lahayn.” – (Quraanka 8:22).
Islaamku waa diin furfuran .. macnaha waa in fikirkeenna ka xoreynayo aqbalida indho la’aanta ah wuxuuna naga xoreynayaa inaan caabudno ilaahyo been ah (rabitaan adduun, lacag iwm.)
Waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin xorriyadda reer galbeedka iyo Islaamka ayaa ah in xorriyadda ‘Liberalism-ka reer galbeedka aysan raacin sida saxda ah ee loo fikiro, ama haddii si kale loo dhigo inta badan dadka raacsan xorriyadda reer galbeedka ma fahansana in xorriyadda aysan noqon karin wax dhammaystiran. Maxaa yeelay haddii xorriyadda ay tahay mid dhammeystiran qofwalba waa inuu awood u yeesho inuu sameeyo waxa uu doonayo, oo ay ku jiraan xumaanta sida dilka iyo xatooyada.
Xorriyadda reer galbeedka waa mid ku salaysan dareen, qofwalbo iyo waxa uu dareemo. Haddii aad ku tiraahdo Illaahay ayaa jira waxay ku leeyihiin ma dareemayo inuu illaahay jiro ‘ma dareemaayo illaahay, ma maqlo. Waan ogahay in dilku khalad yahay, in kastoo aanan arki karin, maqli karin, ama aan taaban karin si aan u ogaado sababta ay u khaldan tahay. Sidoo kale waa is-beenin maxaa yeelay xoog-sheegashayaashu ma caddeyn karaan sababta ay sax u yihiin.
Arrin kale ayaa ah: Sayniska! Dadka reer Galbeedka badankood waxay u haystaan ​​in wax kasta oo cilmi ahaan lagu caddeeyo ay run yihiin. Hadaba sidan xaalku maaha. Weydii saynisyahan kasta oo dhab ah waxayna ku odhanayaan saynisku kuma tusi karo waxa runta ah. Sayniska waa qaab uun, qalab lagu qiimeeyo waxa aan ka kasbano khibradaheenna. Jawaabo nama siin karaan, qalab uun bay na siin karaan. Sayniska iyo aragtiyaha ay soo saaraan reer galbeedka ayaa loo meheriyaa bulsho weynta reer galbeedka. Xittaa heer waxaa la gaarsiiyey in aadanuhu ay kasoo jeedaan daanyeero.
Aragtida tadawurka iyo in aadanuhu kasoo tafiirmay daanyeero iyo xayawaano dhalan rogmay, dhammaantood waxa ay ku danbeeyeen dhalanteed, aqoonta casriga ahna boos kuma laha khuraafaadkani – gebi ahaanba aqoonta cusub ee maanta jirtaa waa ay beenisay aragtidan nooc kasta oo loo jilo ama loo iib geeyaba. Sidaas awgeed, Islaamka horumarka waa kuu oggalyahay waa haddii aysan ka hor imaanaynin jiritaanka Eebe iwm.